Iftiinka Masiixa ee Adduunka, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Farqiga u dhexeeya iftiinka iyo mugdiga waa tusaalaynta inta badan loo adeegsado Kitaabka Quduuska ah in wanaag laga kala tago xumaanta iyo xumaanta. Ciise wuxuu u isticmaalaa nuurka inuu isu muujiyo: Iftiinka ayaa dunida yimid, dadkuna waxay aad uga jeclaayeen gudcurka iftiinka, maxaa yeelay, shuqulladoodu shar bay ahaayeen. Maxaa yeelay, ku alla kii shar falaa nuurkuu nebcaadaa, iftiinka uma fuulo si waxa uu samaynayo loo muujiyo. Si kastaba ha noqotee, kuwa runta raacsan waxay falayaan waxay u socdaan xagga nuurka oo way muuqataa inay ficilkoodu ku dhisanyahay Ilaah » (Yooxanaa 3,19: 21 Tarjumaadda New Geneva). Dadka ku nool mugdiga waxaa si togan u saameeya iftiinka Masiixa.
Peter Benenson, oo ah qareen Ingiriis ah, wuxuu aasaasay Amnesty International wuxuuna si cad u sheegay markii ugu horaysay 1961: "Waxa fiican inaad shumac shumac ah umada ka caajiso madowga". Markaa shumac ku wareegsan silig jiifa ayaa astaan ​​u ah bulshadiisa.
Rasuul Bawlos wuxuu sharaxayaa sawir la mid ah: “Mar dhow habeenku wuu dhammaanayaa maalintiina waa joogi doontaa. Taasina waa sababta aan u rabno inaan uga baxno wax qabadyada qayb ka ah mugdiga oo aan baddalno hubkeenna hubka nuurka » (Rooma 13,12 Rajada Dadka oo dhan).
Waxaan u maleynayaa inaan mararka qaar qushuucno awooda aan u leenahay inaan dunida si wanaagsan ugu saameynno. Waxaan u muuqanaa inaan ilaawin sida iftiinka Masiixu isbedel weyn u sameyn karo.
Waxaad tihiin iftiinka dunida iftiimiya. Magaalo sare oo buurta dusheedii ma qarsoona. Ilays laambad ha shidin, daboolna ha daboosho. Taas bedelkeeda: waa loo dejiyay si ay u siiso iftiin qof kasta oo guriga jooga. Iftiinkaagu waa inuu u iftiimaa si la mid ah dadka oo dhan hortooda. Iyagu waa inay aabahaaga jannada ku gartaan camalkaaga oo ay isaga u maamuusaan » (Matayos 5,14: 16 Rajada Dadka oo dhan).
In kasta oo mugdigu mararka qaar inaga dulqaadan karno, haddana weligeed ma dabooli karto Ilaah. Waa inaanan waligeen ogolaan cabsi ka qabta xumaanta adduunka maxaa yeelay waxay noo horseedda inaanan eegin qofka Ciise yahay, waxa uu nagu sameeyey, iyo waxa naloo sheegay inaan sameyno.
Arrin xiiso leh oo ku saabsan dabeecadda iftiinka ayaa ah sababta mugdigu uusan awood u lahayn. Waxaa taa ka duwan, in kasta oo nalka kaxeeyo mugdiga, ma ahan. Ifafaalehan ayaa ka dhex muuqda Qorniinka, oo ku saabsan nooca Ilaah (Iftiimin) iyo shar (Madoow), door caan ah.
«Warkii aannu ka maqalnay isaga oo aannu kuu sheegayno oo ah isaga oo ah; Ilaah nuud buu leeyahay, oo gudcur kuma jiro isaga. Markaan nidhaahno waxaan isaga ku wehelinahay isaga oo weli gudcurka ku dhex soconno, been baan sheegnaa oo ma runno runta. Laakiin haddaynunu ku soconno nuurka siduu isagu nuurka ugu jiro, wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa, oo dhiigga Ciise, oo wiilkiisa ah, wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan. (1 Yooxanaa 1,5: 7).
Xitaa haddii aad dareento sida shumac aad u yar oo dhexda dhexdeeda mugdi galaya, xitaa shumac yar ayaa wali bixiya nalka nolosha iyo diirimaad. Qaab yar oo aad mooddo, waxaad ka tarjumaysaa Ciise, oo ah iftiinka dunida. Waa iftiinka cosmos-yada oo dhan, mana ahan kaliya adduunka iyo kaniisadda. Wuxuu ka qaadaa dembiga dunida, ma aha oo keliya kuwa rumaysta ee keliya laakiin wuxuu ka lee yahay dhammaan dadka dhulka jooga. Awoodda Ruuxa Quduuska ah, oo xagga Ciise Aabbaha ah ayaa gudcurka kaaga soo bixiyey iftiinka cilaaqaadka nolosha leh ee leh Saddexanka Ilaaha ah, kaasoo kuu ballanqaadaya inaanu marna kaa tagayn. Taasi waa warka wanaagsan ee ku saabsan qof kasta oo dunidan jooga. Ciise wuu jecel yahay dadka oo dhan wuuna u dhintay kulligood, ha ogaadeen amase yaanay aqoon.
Markii aan ku sii barbaarno xiriirka qoto dheer ee aan la leenahay Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa, waxaan had iyo goor dhalaalayaa iftiinka nolosha ee Ilaahay. Tani waxay quseysaa shaqsi ahaan iyo sidoo kale bulshada.
Waayo, kulligiin waxaad tihiin carruurta nuurka iyo carruurta maalinnimada. Kama nihin habeenka iyo gudcurka » (1 Tesaloniika 5,5). Annagoo ah carruurta iftiinka, waxaan diyaar u nahay inaan noqonno kuwa fudud. Adoo ku siinaya jacaylka Ilaah qaab kasta oo suurogal ah, mugdigu wuxuu bilaabi doonaa inuu madoobaado oo waxaad noqon doontaa mid badan oo ka tarjumaya iftiinka Masiixa.
Ilaaha Saddexanka ah, oo ah iftiinka weligiis ah, ayaa ah isha "iftiinka" oo dhan, jidh ahaaneed iyo ruux ahaanba. Aabbaha u yeedhay nuurka inuu u soo diray Wiilkiisa inuu noqdo nuurka dunida. Aabaha iyo Wiilku waxay soo diraan Ruuxa si uu iftiinka ugu keeno dadka oo dhan. Ilaah wuxuu ku nool yahay iftiin aan la gaari karin: Isaga oo keliya ayaa dhiman, oo wuxuu ku noolaa iftiin aan qof kale sii adkaysan karin, oo qofna weligiis ma arkin isaga. Isagaana iska leh sharaf iyo xoogga weligeed ah. (1. Timoteyos 6,16 Rajada Dadka oo dhan).
Ilaah wuxuu isku muujiyay naftiisa xagga wejigiisa wiilkiisii ​​Ciise Masiix: «Waayo, Ilaah, kan yidhi: Iftiin ha uga baxo gudcurka, wuxuu qalbiyadeenna siay iftiin ifaya, si iftiinku u soo baxo aqoonta aqoonta ammaanta Ilaah wajiga Ciise Masiix " (2 Korintos 4,6).
Xitaa haddii ay tahay inaad si shaki leh ugu ekaato iftiinkaan xad dhaafka ah Si aad u awood u yeelatid inaad aragto (Ciise), haddii aad muddo dheer eegto, waxaad arki doontaa sida mugdigu u fog yahay oo aad u ballaaran.